INdlu yeeNdwendwe iMut Mee, iGumbi eliMhle labalandeli w. Ishawa eshushu
Ibekwe kwigadi ethandekayo enomthunzi elunxwemeni loMlambo iMekong eNong Khai, eThailand enemithi emininzi sinamagumbi athandekayo anefeni kunye nangenawo igumbi lokuhlambela. Intle kakhulu, ikwisikhundla kwaye ikhathalelwe kakuhle izinto eziluncedo. Ubhala kwincwadi encinci uku-odola ukutya.
Sineminyaka engama-25 silapha sinyamekela abantu kwigadi yethu emangalisayo. Kukho iYoga, iReiki, iMassage, iibhayisekile, iimephu, ukutya okulungileyo, izitya zemifuno, imiyalelo yokupheka kwaseThai, ukucamngca, kunye nabantu abaninzi abapholileyo onokuthetha nabo. Awunakuze ube nesithukuthezi.
IPaki yeMizobo yeyona ifana nayo eThailand, uMlambo iMekong uyamangalisa, i-Aquarium yodwa (ukutya i-scuba diver ukuya kwiintlanzi nge-14.00hrs yonke imihla). Kukho imivalo emininzi yokuhlola.
Mna okanye unyana wam uBen sihlala sikhona. Singathanda ukukuxelela zonke izinto onokuthi uzenze ... Ipaki eqingqiweyo, Imarike yeTaa Sadej, I-Aquarium ene-Giant Cat Fish, I-Historical Park yahlala kwiminyaka eyi-3500 edlulileyo kumatye akhiwe ngamakhowa. Kwaye ulwazi malunga nokukhwela ibhayisekile, iitempile, kunye nokunye okuninzi.
Mna okanye unyana wam uBen sihlala sikhona. Singathanda ukukuxelela zonke izinto onokuthi uzenze ... Ipaki eqingqiweyo, Imarike yeTaa Sadej, I-Aquarium ene-Giant Cat Fish, I-Histor…